देश समृद्ध बनाउने कोरियाली सूत्र :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
देश समृद्ध बनाउने कोरियाली सूत्र
उनकै पार्टीका बहुमत सदस्यले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरे भने उनैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले पनि उनका विरुद्ध फैसला सुनाए । एउटा बहालवाला भ्रष्ट राष्ट्रपतिले जेलको हावा खानुप¥यो । त्यति मात्र होइन, उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट समेत निस्काशित ग¥यो । जेलमा पनि उनलाई साधारण सेलमा राख्ने निर्णय गरियो ।
विडम्बना हाम्रो देशका राजनेताको हकमा ठीक उल्टो अवस्था छ । हाम्रो देशमा राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूलाई मुद्दा नै नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ । यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ । हाम्रो देशमा यदि कुनै भ्रष्ट नेतालाई महाअभियोगका लागि प्रस्ताव आएमा सबैभन्दा पहिले त संसदबाटै माहाअभियोग फेल गरिन्छ होला ! आफ्ना पार्टीका संसदलाई ह्वीप जारी गरेर भए पनि महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्नबाट रोकिन्थ्यो होला र सके–चलेसम्म न्यायालयबाट पनि फेल गराइन्थ्यो होला । हाम्रो मुलुकमा राजनेता हुन चाहिने योग्यता भनेकै झुटो बोल्न सक्ने, भ्रष्टाचार गर्न माहिर र टाउको दुख्दासमेत राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएर विदेश धाउने हुन सक्नुपर्छ जस्तो भएको छ ।
हामी नागरिकलाई पनि आफूलाई मन पर्ने नेता हो भने जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि दूधले धोइएको लाग्छ । कोरियाली भ्रष्ट र आम मजदुरविरोधी राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर आयोजित गरिएका विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममा हामीले पनि प्रवासी मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो हक–अधिकारका लागि दबाब सृजना गर्न सहभागिता जनायौँ । कोरियाको राजधानी सोलस्थित राष्ट्रपति भवन आसपासमा २० देखि २५ औँ लाख मान्छे जम्मा भएर हक अधिकार र भ्रष्ट राष्ट्रपतिविरुद्ध घण्टौँ नाराजुलुस गरियो । तर, ¥याली आयोजना गरेको ठाउँबाहेक कतै पनि सडक बन्द भएको देखिएन । तोडफोड, आगजनीको नामै लिइएन । जनमासले आफूले फालेको पÞmोहोर या कागजका सानातिना टुक्रासमेत ¥यालीलगत्तै आफैँले टिपटाप गरेर व्यवस्थापन गरे ।
हाम्रो देशमा विभिन्न हक–अधिकारका नाममा देशै बन्द गराउने, सार्वजनिक यातायातका साधनमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, कुटपिट गर्ने, देशलाई नै बन्धक बनाउने, हिंसा फैलाउने, प्रदूषण फैलाउने काम गरिन्छ । वास्तवमा हामीले हक–अधिकार या विभिन्न माग राज्यबाट गरेको हो भने सम्बन्धित निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय या राष्ट्रपति कार्यालय आसपासमा दबाब दिने हो । माग पूरा नहुन्जेल धर्ना, प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो ।
कोरियाली जनताले जसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएकी रास्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई दबाब सृजना गरेरै पदमुक्त मात्रै गराएनन्, जेल चलान गर्न बाध्य पारे । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै कल–कारखाना, स्कुल, बाटो र कार्यालय बन्द गराएनन् । सम्बन्धित निकायमा ¥याली, धर्ना गरेर दबाब दिए, त्यो पनि बिदाको दिन साँझको समयमा ।
हाम्रो देशमा भने माग पूरा गराउनुप¥यो भने सबैभन्दा पहिला नेपाल बन्द घोषणा गरिन्छ । काम गर्नेलाई काम गर्न दिइँदैन । यतिसम्म कि बिरामीलाई उपचार गर्न दिइँदैन अर्थात् बाटो बन्द गरेर गरीब, दुःखीलाई झन दुःखी बनाइन्छ । सडकमा हिँड्नेमाथि कुटपिट र आक्रमण गरिन्छ । उसको सवारीसाधनमा आक्रमण गरिन्छ । स्कुल, कल–कारखाना चल्न दिइँदैन । आफ्नो हक–अधिकारका नाममा अर्काको हक–अधिकारमाथि बेवास्ता गरिन्छ ।
यस्तो कार्यले थोरै मात्रामा माग त पूरा होलान् तर ठूलो मात्रामा देशले नोक्सान व्यहोरिरहेको हुन्छ । नेताहरू पनि एकातिर देश विकास र समृद्धिको कुरा गर्छन्, अर्कातिर आफ्नै कार्यकर्तालाई उचालेर देशै ठप्प पार्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो मुलुकका नेता, पार्टी र तिनका कार्यकर्ता देश विकासको ऐजेन्डाभन्दा पनि अर्को पक्षको विरोध, गालीगलौज र हेलाहोचो देखाउनेमै समय खर्च गरिरहेका पाइन्छन् ।
खरो बोल्ने, अर्काको विरोध गर्ने नेता नै ‘महान्’ मानिन्छ । नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई पनि आफूलाई मनपर्ने पार्टीको नेता जति नै नालायक भए पनि पटकपटक उसैको नेतृत्व मन पर्छ । कोरियामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षीदलका नेता कुनै नगरपालिकाको मेयर या अन्य विशिष्ट व्यक्तिको वरिपरि कुनै सुरक्षा दलबल देखिँदैन । पार्टीको अध्यक्षसमेत आमजनताजस्तै पैदल हिँड्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । चाहिएमा कोरियाले आफ्ना नेतालाई लक्जरियस कार, उच्च सुरक्षा, बडिगार्ड, आवास र अन्य सेवासुविधा दिन नसक्ने होइन । कोरियामा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र आमजनताको सोच ‘देश पहिला’ भन्ने छ । हाम्रो देशका नेता, कार्यकर्ता र नागरिककै पनि सोच ‘आफू पहिला’ भन्ने देखिन्छ । आफन्त, आसेपासे, चेला, चम्चा, कार्यकर्तालाई हेरिन्छ । कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गरेर सम्पन्न हुने सोचको विकास भएको पाइन्छ ।
एउटा नेतालाई मरुन्जेलसम्म पदमुक्त भैसक्दा समेत सेवा–सुविधा प्रदान गरिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति, जसको राष्ट्र निर्माणमा कुनै खास भूमिका हुँदैन उसैलाई अथाह सुविधा र राज्यको ढुकुटी खर्च गरिन्छ । मासिक ८ लाख जति सरकारले खर्च बेहोर्छ । यो कुराको विरोध कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता वा नागरिकले किन गर्दै ? यसले हाम्रो मुलुकमा जसरी हुन्छ, राज्यको दोहन गर्नु महानता हो भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ ।
कोरियामा अहिलेका वर्तमान रास्ट्रपतिसमेतले विगतमा विभिन्न ¥यालीमा सहभागिता जनाउँदा आमजनताका बीचमा भुइँमा बसेको देखिन्थ्यो । जबकि त्यतिबेला उनी राष्ट्रपतिको दौडमा सबैभन्दा अगाडि थिए । लोकप्रिय उम्मेद्वार र विपक्षी दलका नेता थिए । आममजदुरको बीचमा बसेका बेला हामीले समेत हात मिलाउन पाएका थियौँ । हाम्रो देशमा भने नेताहरूलाई ¥याली जुलुसमा पनि अत्याधुनिक गाडी, मञ्च र फूलमालको आवश्यकता पर्छ । अनि नेताहरू खुटामाथि खुट्टा राखेर जनमानसतिर उल्टो जुत्ता देखाउँदै आमनागरिकको पहुँचभन्दा निकै पर शान देखाइरहेका हुुन्छन् ।
नेता आमजनताको सेवक हो । हुनुपर्ने हो । हाम्रो देशमा अलि ठूलो नेतासित हात मिलाउन पाउनु भगवानै भेटेको अनुभूति उसैको पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले गर्छन् । हामी मुलुकमा विकास नभएको गुनासो गर्छौं । कोरियामा पूर्व राष्ट्रपतिमाथि समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान भैराखेको छ भने हाम्रो देशमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानुन नै नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकातिर नेताहरू देश विकास गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने ठूलठूला सपना बाँड्छन्, अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेमा आफूमाथि मुद्दा नलाग्ने कानुन बनाउँछन् । अनि कसरी हुन्छ देशको विकास, कसरी हुन्छ समन्याय !
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २० (February 03, 2018)